Airbnb.org - Izikhukhula e-Western Europe
Thola izindlu zezimo eziphuthumayo e-Deutschland, Belgique & Nederland
Bekunikezelwa ngezindawo zokuhlala phakathi no- July 19, 2021 nomhla ka- August 2, 2021 kubasebenzi bosizo nakubantu abaphelelwe yindawo.
Funda kabanzi nge-Airbnb.org
Izikhukhula e-Western Europe
I-Airbnb.org ixhumanisa abantu abahlaselwe yizinhlekelele nababungazi abanikeza indawo yamahhala yokuhlala. Kusukela ngo-2012, izinkulungwane zabantu ziye zabamba iqhaza kulolu hlelo.
Nikeza indawo yakho eyengeziwe mahhala kubantu abadinga izindlu okwesikhashana.
Funda ukuthi i-Airbnb.org iqale kanjani
Kusukela ngo-2012, izinkulungwane zababungazi zivule amakhaya azo.
Awuwedwa kulokhu. Ngaphezu kwethimba le-Airbnb elitholakala-24/7 elisiza amakhasimende, uzokwazi ukuxhumana nethimba elichwepheshile uma unemibuzo ngokubhukha ku-Airbnb.org.
I-Airbnb.org yinhlangano ezimele, esekelwa emphakathini engenzi nzuzo ebambisana nezinhlangano ezingenzi nzuzo ukuze kunikezwe abantu izindlu zezimo eziphuthumayo ngezikhathi zenhlekelele.
Ngezindlu Zezinhlekele ze-Airbnb nezinhlelo zokuhlala kwe-Frontline, i-Airbnb isebenzisane nemiphakathi ukuze kusizwe abantu ngezikhathi zokuswela kusukela ngo-2012. Manje, i-Airbnb isungula i-Airbnb.org njengenhlangano ezimele ukuze kwakhiwe phezu kwale mizamo futhi kusizwe abantu abaningi ngokwengeziwe.
I-Airbnb.org iyinhlangano ezimele enebhodi labaqondisi abazimele. Iyinhlangano egunyaziwe esiza umphakathi ekhululiwe ekukhokheni intela ngaphansi kweSigaba 501(c)(3) se-U.S. Internal Revenue Code. Iminikelo eya ezinhlanganweni ezinesimo se-501(c)(3) zingase zikhokhiswe intela.
I-Airbnb ikhokhela izindleko zokusebenza kwe-Airbnb.org ngakho iminikelo yomphakathi ihamba ibanga elide ekusekeleni abantu ngezikhathi zenhlekelele.
Thola okwengeziwe mayelana nokuthi i-Airbnb.org isekela bani kanye nomthelela umphakathi we-Airbnb obe nawo kuze kube manje. Umbiko wokuqala waminyaka yonke Womthelela we-Airbnb.org uzotholakala ngaphambi kokuphela kuka-2021.
Umphakathi we-Airbnb ungasekela i-Airbnb.org ngokubungaza noma ngokunikela. Ababungazi bangakhetha ukubungaza ukuhlala kwe-Airbnb.org mahhala noma ukunikela ngamaphesenti enkokhelo ngayinye. Laba babungazi bazothola ibheji lokusekela i-Airbnb.org kumaphrofayili abo. Noma ubani anganikeza umnikelo wesikhathi esisodwa ku-Airbnb.org nganoma yisiphi isikhathi.
Funda kabanzi mayelana nokubungaza ukuhlala kwe-Airbnb.org kanye nokunikela ekukhokhelweni kwakho.
Ukubungaza ukuhlala kwezimo eziphuthumayo nge-Airbnb.org
Ukufanelekela ukuhlala okuphuthumayo nge-Airbnb.org
Indlela yokubhukha ukuhlala kwezimo eziphuthumayo nge-Airbnb.org
Ukuxhumana nabosizo be-Airbnb.org